Mumvura wokuvaka mufekitari wokushongedza mushonga wokunze wokunze - China Boegger - China Boegger - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Mhoteredzo Yepuro>Mwenzi dzinoshongedza wiaya
Mash waya yokushongedza inogona kuboshwa zvikurukuru nesimbi isina kunaka, aluminium alloy, brass, mhura kana kuti zvimwe zvinhu. Mvura dzemvura dzemvura zvino dziri kubata maziso evagadziri vazvino uno. Inoshandiswa zvikurusa seketini, mvura dzehoro yokudyira, kuzviparadzanisa mumahotera, kushongedzwa kwesizi, Zvinhu zvemhuka uye zvifeko zvekuchengeteka, zvichidaro.
Mwenzi dzinoshongedza dzimba dzokubereka
Kona yokushongedzwa kwebhunzi
Zvinhu zveWall Cladding Decorative Mesh Nezvimwe zvinhu zvakasiyana - siyana, kugadzirwa kwechienzi, mhatsa yamavara, kugara nokuchinja, Chishanya chemvura chemvura chinogovera mutoo wokushongedza wazvino uno nokuda kwezvivako. Apo rinoshandiswa seketa, rinogovera kuchinja kwakasiyana - siyana kwemavara nechiedza uye rinopa kufungidzira kusina miganhu.
Mvura yokushongedza yemsimbi ine pasiro nesirivha.
Mhondo yemvura yemvura yokushongedza yemvura ine pasiro nesirivha.
2. Kushandiswa mumigodhi, peteroli, makemikari, zvokudya, mishonga, kugadzira michina nerimwe basa.
3. Inoshandiswa nokuda kwemheya, kuchenesa, hood nhare, nheya, dehumidifier, muungani weguruva, nj. rakakodzera nokuda kwokuvunza kwakasiyana - siyana, kubvisa guruva uye zvinodikanwa zvokuparadzana.
Chimbiso: chinoshandiswa zvikuru mukuvvunza kwokudenha kwemakemikoro, fiber huru, fiber inopfuura, debwe, Mhena isina kunaka nezvimwe zvinhu.
Michina inoshanda: spinneret nezvimwe zvinhu zvichangera zvemichina yakasiana - siana inotunzwa uye yapamusoro, zvinhu zveganda uye zvisiri zvakanaka, maviri-screw extruder.
Yakakodzera nokugadzira foni yemberi nebhotini yebhoti uye netire. Kugodha, peteroli, basa ramakemikari, zvokudya, mishonga, kugadzira michina, zvimwe.
Mbiri:Mvura yesimbi yakawedzerwa
Taga: decorative metal panels, decorative wire mesh, building cladding, external decoration,
Mwenzi dzinoshongedzwa dzinoshandiswa nokuda kwezvishongedzo muzvihoro zvekuratidziro nemahotera ane miuyo yakanaka yokushongedza
Chii chiri kuvaka?
Kushongedzwa kwokushonga kwokunze kwokunza
Kushanda kwenyaya yokushongedza kunotevera
Nheyo inoumba yokuvaka mimba yakaita sezvinotevera
Chii chiri kushongedzera kwokunze kwemotokari?
Mvura yokushongedzwa inoitwa waimba
Zvikuru Zvikuru Zvikuru — Zvakanaka Zvakanaka — Zvinhu Zviri — Zvakanga zviri Zvinhu Zviri — Zvinhu Zviri — Zvakanaka Zvakanaka?